Lahatsoratra momba an'i Singapore
Jolay 16, 2021 Shubham Sharma Singapore, Travel, visa ho
Ny fepetra takian'ny visa ho an'ny olom-pirenena ao Singapore dia ny fetran'ny fidiran'ny governemanta Singapore ho an'ireo manana Passports Singapore. Ny isan'ny fifanarahana fanavotana ny visa nosoniavina niaraka tamin'i Singapore dia mahatonga ny pasipaoro Singapore faha-2 amin'ny resaka fahalalahana visa araka ny voalaza
Mandehana mankany Torkia avy any Singapore
Jona 16, 2021 Maitri Jha Singapore, Travel, vorontsiloza, visa ho
Ho an'ny fitsidihana latsaky ny 90 andro ao anatin'ny 180 andro taorian'ny nidiranao voalohany tany Torkia, dia tsy mila visa ny tompon'ny pasipaoro Singapore rehetra. Satria mety miova ny fitsipiky ny visa amin'ny fotoana rehetra, mamporisika anao izahay hijery amin'ny dianao
Ahoana no ahazoana Job any Singapore?
Enga anie 26, 2021 Antika Kumari asa, Singapore
Raha mieritreritra ny hiasa any Singapour ianao dia misy vaovao tsara. Ny indostrian'ny fahasalamana, ny fitaterana, ny fanabeazana, ny aérospace, ny fiantohana, ny fampiasana, ny biomédical, ary ny indostrian'ny fananganana dia samy mandray mpiasa an-keriny avokoa. Nahita fironana tato ho ato ihany koa ny tsenan'ny mpiasa any Singapour: nanangona mpiasa bebe kokoa ny mpampiasa
Visa any Singapore ho an'ny karana
Oktobra 28, 2020 Shubham Sharma Singapore, visa ho
Satria sidina kely fotsiny dia lavitra i Singapore, ary toerana iray malaza eo amin'ireo mpizahatany avy any India. Ny visa Singapore dia fomba tsotra ho an'ny karana. Nanandrana nanome anao topy maso momba ny Visa any Singapore any India aho